Soo dejisan Mp3DirectCut 2.22 – Vessoft
Converters Audio, Editor Audio
Soo dejisan Mp3DirectCut
Mp3DirectCut – si sahlan ah in la isticmaalo software si ay u maareeyaan faylasha codka ah. Xilaalka ugu mudan hawlaha software ka mid ah suurtogalnimada in ay soo jaro qayb ka mid ah kuwan raadkaygay, cut, nuqul, xanjo ama midowdo faylasha. Mp3DirectCut ku jira qalab si ay u dejiyaan heerka mugga iyo ogaado joojoojiyo ee files audio. Software wuxuu kuu ogol yahay inaad aragtid warbixin ku saabsan kuwan raadkaygay audio, tags saxaa oo ku dar faallooyinka iyaga. Mp3DirectCut ta khayraadka habka ugu yar oo u saamaxaaya in la beddelo midabka ah ee asalka ah ama qalabada kala duwan.
Tiro badan oo ah qalab si la files audio shaqeeyaan
Caadi Volume iyo ogaanshaha la joojoojiyo cadaadiska ka
Settings muuqashada qalabka iyo background
Mp3DirectCut Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... BriskBard 1.2